A Genocide Incited on Facebook, With Posts From Myanmar’s Military – CRM
Posted on October 16, 2018 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)
he purpose of the campaign, which set the country on edge, was to generate widespread feelings of vulnerability and fear that could be salved only by the military’s protection, said researchers who followed the tactics.
Source : https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html
Posted on September 28, 2018 Author rightsforburma rightsforburma
NEW YORK (Reuters) – A U.S. government probe into Myanmar’s campaign against the Rohingya Muslim minority was not aimed at determining whether genocide or crimes against humanity had been committed, but those responsible could still be held accountable for those crimes,atop State Department official said on Thursday. The U.S. State Department report released on […]
မြန်မာအစိုးရဟာ နိုင်ငံတွင်းက ထွက်ပြေးနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေကို လူမျိုးတုံးရှင်းလင်းရေး လုပ်နေ တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားတယ်လို့ နိုင်ငံတကာတရားသူကြီးတွေပါဝင်တဲ့ သမာဓိခုံရုံးအဖွဲ့က သောကြာနေ့က မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများက ပညာရှင်နဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သမာဓိခုံရုံးအဖွဲ့က မျက်မြင် သက်သေတွေကို မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာ ၅ ရက်ကြာ စစ်ဆေးမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခုလို ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရက ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရှင်းလင်းနေတာဟာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ် လို့ ဆွေးနွေးပွဲကိုဦးဆောင်သူ ဒန်နီရယ် ဖီရာရာစတိန်းက မလေးရှားတက္ကသိုလ်မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီလိုလူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ရှင်းလင်းနေတာတွေကို မဟန့်တားနိုင်ခဲ့ရင် သေဆုံးသူအရေအတွက် ပိုများလာနိုင်တယ်လို့လည်း သူကပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုဖိအားပေးဖို့ အဲဒီ သမာဓိခုံရုံးအဖွဲ့ဟာ သူတို့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေကို နိုင်ငံတကာနဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေဆီ ပေးပို့သွားမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ […]
Commission Co-Chairs Speak Out on Burma’s Humanitarian Catastrophe
WASHINGTON, DC – Congressmen James P. McGovern and Randy Hultgren, Co-Chairs of the Tom Lantos Human Rights Commission, issued the following statement in response to the escalating violence unleashed against the Rohingya people by the Burmese military in the aftermath of the August 25th attack on security forces attributed to the illegal armed group known as […]
ရခိုင်ခရီးစဉ် ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ သုံးသပ်ဆွေးနွေး